Gịnị bụ Autofill?
Autofill bụ akpaka online ụdị dịanyā dị na nchọgharị weebụ na ngwa. E mere ya n'ihi na ọrụ ịzọpụta oge mgbe ejuputa na iche-iche online. Kama iji kọmputa ede ọ bụla otu zuru ezu na a ụdị, na Autofill ga-akpaghị aka jupụta na niile nkọwa maka gị.
Autofill bụ n'etiti ndị kasị bara uru àgwà na iOS n'ihi na ọ na-eme gị site na mkpa ka ojiji nke aka keyboard na-adịghị ewe tịghachị okwuntughe na logins na kpọtụrụ ozi dị ka nọmba ekwentị ma ọ bụ adreesị email. Ihe yiri nke na Autofill ezie na-abịa na nkịtị iPads, iPods na iPhones, ebe otutu ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ike iji kpọmkwem otu ngwaọrụ ma na-aga kpọmkwem otu ihe ahụ na ibe weebụ, na mgbe ahụ onye ọzọ a na-ite ke ma ọ bụ ha nkọwa ga-ejupụta na ya. Nke a pụrụ ịdị ize ndụ dị ka nke ọma na-ekwe omume nke wayo. Ikpochapụ gị Autofill data na gị iPhone, na-eso nzọụkwụ nyere n'okpuru.
Kpatụ "Mwube" ngwa na akara ngosi Site na Ihuenyo gị iPhone imeghe ntọala.
Pịgharịa gaa na ala na enweta na "Safari".
Enweta "Autofill" ke Safari ntọala.
Ugbu a enweta "Zọpụta Okwuntughe" ma ọ bụ "na-azọpụta E Si Nweta kaadị" ka ihichapụ data.
Ị ga-ahụ ndepụta nke saịtị na usernames azọpụta, mgbata "Dezie" na n'elu aka nri na họrọ data ị chọrọ ka ihichapụ na mgbe ahụ enweta "Hichapụ" na n'elu aka ekpe.
Ka ihichapụ kaadị nkọwa, họrọ kaadị nhọrọ. Ị ga-ahụ ndepụta nke kaadị akwụmụgwọ azọpụta, enweta "Dezie" na n'elu aka nri na họrọ data ị chọrọ ka ihichapụ na mgbe ahụ enweta "Hichapụ" na n'elu aka ekpe.
Ndị ọzọ na atụmatụ nke AutoFill
N'ihi na ozi banyere gị dị ka adreesị na aha mụ mgbe nile, na AutoFill atụmatụ nke Safari omume na-akpaghị aka jupụtara n'ime ndị a na-ahụkarị ebe ọnụ gị na onye Ama kama chọrọ ka ị na-jupụta na ndị ubi iche iche na-eji otu mgbata. Safari nwekwara ike na-esochi nke okwuntughe na onye ọrụ aha na kaadị Ama. Mgbe ị na-eme ka a ika akaụntụ ọhụrụ na a na saịtị weebụ ihe ndị ọzọ, Safari ajụ bụrụ na ị ga-amasị ya buo na ọbụna n'ịwa a paswọọdụ n'ihi na ị na ya.
Ama kọntaktị: Safari jupụtara n'ime na na gị onwe onye ndụmọdụ na online iche-iche. Na onwe Ama bụ nke enwetara site gị nkọwa na Ndi ana-akpo ngwa. Ị ga-ahụ onwe gị aha ke 'm Info oke' isiokwu.
Ọ bụrụ na ị na-ejuputa na mgbata AutoFill on keyboard, a na ụdị na Safari ga jupụta ọmụma i echekwara na aha, adreesị, nọmba ekwentị, na e-mail adreesị ubi si gị onwe gị na kọntaktị na kaadị na pastes ndị ọmụma na kwesịrị ekwesị ubi.
Aha na okwuntughe: Ọ bụrụ na ị chọrọ Safari icheta ọ bụla na aha njirimara na paswọọdụ, i nwere ike iji a nhọrọ nke AutoFill ime otú ahụ. Ya mere, mgbe ọ bụla ị chọrọ nbanye a saịtị, ị na-adịghị mkpa Tinye aha njirimara gị na okwuntughe ọzọ.
E Si Nweta kaadị: àgwà a nwere ike ịbụ ezigbo timesaver na ihe omume ị na ịzụ ahịa online. Ọ bụrụ na ị nwere E Si Nweta kaadị nhọrọ-arụ ọrụ, ị pụrụ nanị akwụ ụgwọ maka ihe ị zụrụ online-enweghị na iji kọmputa ede na nọmba kaadị i. The akụ kaadị Ama ga-akpaghị aka jupụtara na site Safari. Kpatụ kaadị ị ga-achọ akwụ ụgwọ.
Uru nke AutoFill
Iji Autofill na gị iPhone nwere ike ịbụ oké uru n'ihi na ị karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-adịghị amasị na iji kọmputa ede oge niile. Na Autofill, na-ejuputa iche-iche ka mgbe niile mfe. Ọ dịghị mkpa na n'ihi na ị na pịnye ọ bụla zuru ezu nke ụdị na ekwentị gị n'ihi na ọ ga-akpaghị aka jupụta niile n'ihi na ị. Ọ na-akwado aha, adreesị, nọmba ekwentị, wdg O na-akwado kaadị nke bụ goof ọhụrụ n'ihi na ndị na-ịzụ ahịa online si ha igwe.
Ụkọ ihe ụfọdụ nke Autofill
Ọ bụrụ na ị bụ ụdị na bụ akpachapụghị anya na ekwentị gị ma ọ bụ ị na-enye ndị mmadụ ekwentị gị n'ụzọ ọ bụla, mgbe ahụ AutoFill nwere ike ịbụ nke oké mwepu. Ebe ọ bụ na ị nwere gị onwe data echekwara ka akwụmụgwọ gị adịkwa ekwentị gị ma ọ bụ inye onye ekwentị gị ga-abụ nsogbu n'ihi na ị.
Olee otú ele ma weghachi ozi ederede site na iCloud
> Resource> ihichapu> Olee otú iji Kọwaa Autofill on iPhone